Sei Train Travel In Germany Is Amazing | Save A Train
Germany ine makomo makuru, kufema-kutora kumaruwa, uye cosmopolitan maguta izvo kuti chitima kufamba ikoko ainakidza ruzivo. Pane zhinji nakisisa nzvimbo to see including Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, uye Frankfurt, nevamwe vazhinji. hotspots izvi uye maguta maduku zvose interconnected patsime-vakarongeka mhoro-nokukurumidza chitima hurongwa. Izvi zvinoita chitima kufamba mu Germany saka nyore. Pano anoperekedza kuti holidaymakers kuti chitima kufamba mu Germany kuitira une kupfuura nakidza rwendo zvinogoneka.
The best use of Train travel in Germany is during the day, kusanganisira kutsanya Intercity Express, do not require seat reservations. zvisinei, kana uchironga rwendo rwenyu hapana chakaipa Mugshot zvigaro zvenyu pachine. Wanira hwindo chigaro nokuda girl kana kungoti kusarudza chigaro chako kuitira waunowana kunonyanyisa nyaradzo.
Germany inzvimbo huru afambe nemhuri. On German njanji nezvitima, children under the age of six travel for free with no ticket needed. Children over 6 asi makore pasi 15 uyewo kufamba mahara kamwe vari pamwe chete yokufamba-kubhadhara mukuru.
njanji German Train Travel chitima kufamba Mazano travelgermany